နားခိုရာ: သားသားလေး လက်ကြိုက်
သားလေးက လက်ကြိုက်နေပြီ။ ထောင်ထောင်လေး ပွေ့ထားရင် သဘောကျတယ်။ အထူးသဖြင့် နို့သောက်ပြီး မအိပ်ခင်လေးမှာ လူကြီးတွေကိုယ်ပေါ်မှာ ဇိမ်ယူချင်သေးတာ။ နို့သောက်လို့ ၀သွားရင် သူ့ကို လေတက်အောင် ပုခုံးပေါ် အသာအယာ တင်ထားရင်း လမ်းလျှောက်ပေးတာကို သိပ်ကြိုက်တာ။ ခဏလောက်တော့ လူကြီးကသူ့ကို ပုခုံးလေးပေါ် တင်ပြီး လမ်းလျှောက် ပေးရင် ခေါင်းကလေး ထောင်လို့ မျက်လုံး ၀ိုင်းဝိုင်း ပြူးပြုးလေးနဲ့ ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နဲ့ပေါ့။ အတော်လေး နေတော့မှ တဖြေးဖြေးခြင်း မျက်စိလေး မှေးလာလို့ အိပ်ပျော် သွားတာ။ အိပ်ပျော်သွားမှ သူ့ရဲ့ ပုခက်ကုတင်လေးထဲ ထည့်ပြီး ဆက်သိပ်ရတာပေါ့။
သားလေးက မျက်စိရှေ့တင် တော်တော်လေးကို ထွားလာတယ်။ အရပ်ကလေးလဲ ရှည်လာတယ်။ အစားအသောက်ကတော့ အပီအပြင်ကို စားတယ်။ အချိန်ကိုမှန်နေတာပဲ။ တစ်နေ့ကို နို့ဗူး ၅ကြ်ိမ် ၆ကြိမ်လောက်တိုက်ရတယ်။ အစောပိုင်းက 60ml လောက်ပဲတိုက်ပေမဲ့ အခုဆို 90ml လောက်တိုက်မှ အာသာပြေပုံရတယ်။ ကြားထဲမှာ အမေနို့လဲ စို့နေသေးတာ။
ညရှစ်နာရီဆို သူ့ကို 90ml နို့ဗူးတစ်ဗူးတိုက်ရတယ်။ သူဆာနေတဲ့အချိန် နို့ဗူးက အချိန်မီ ဖျော်လို့မပြီးရင် အတင်းကို အော်ငိုတော့တာပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ အမေနို့တိုက်လဲမရဘူး။ ငိုနေတာကို ချော့မော့ပြီး နို့ဗူးလေး သူ့ပါးစပ်မှာ တပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ တရှိန်ထိုးကို သောက်တော့တာပဲ။ ဂျပန်တခေတ်လုံး ငတ်နေတဲ့ အတိုင်းပဲ။ ဒါတောင် အိပ်ခါနီးဆိုရင် အမေနို့ကို ငုံပြီး ဇိမ်နဲ့အိပ်သေးတာ။ အဲဒီလို ဗိုက်ဝသွားဆိုရင် အိပ်ယာလေးနဲ့ အောက်ချထားပေးရင် ခြေတွေကန်ကျောက်လို့ လက်တွေလှုပ်ရှားလို့ ပါးစပ်ကလဲ အူးအူးအားအားနဲ့ အသံတွေထွက်လို့ ကစားလေ့ရှိပါတယ်။ လူကြီးတွေက သူ့ကို စကားပြောရင် ပြန်ပြောချင်သလို ပါးစပ်လေးလှုပ်လို့။ မကြာခဏ ပြုံးပြတတ်နေပြီ။
Posted by little moon at 11:21 AM
အကိုရေ ကလေးကို အတော်ချစ်တာပဲ
ဘလော့ဂ်တွေပေါ်မှာ သားတွေ သမီးတွေကို ချစ်နေတာတွေ မြင်တော့ အားကျမိတယ်ဗျာ..
မိသားစုဘဝ ပျော်ရွှင်မှုများ ရရှိပါစေဗျာ။
ရုပ်ကလေးကြည့်ရတာ ဇွတ် ကျမယ့် ပုံပဲ ဗျို့..။
ဟုတ်တယ်နော်။ သားလေးက မျက်စိရှေ့တင် တော်တော်လေးကို ထွားလာတယ်။
အသဲယားစရာလေး။ Soooo CUTE!!!
ကလေးလေး အကြောင်း စောင့်ဖတ်နေတယ်။ များများ Posts တင်ပေးပါ။ Please...
(ကလေးမရှိရွေ. မနာလိုရွေ. ပြောသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်..